Ukulima Kwentwasahlobo | May 2022
Ungasusa njani iidandelions-Iindlela eziSimahla zamachiza zokubulala iidandelions
Owu, idandelion eyoyikekayo. Le 'ntyatyambo' iya kuzama ukukukhohlisa ngombala wayo otyheli entwasahlobo, kodwa ungabi lixhoba. Nje ukuba ezo ntyatyambo zivuthwe, zibe ziibhola ezimhlophe, kwaye nganye kuzo, xa sele ikhutshelwe umoya, imiselwe ukuba ibe yenye idandelion. Umjikelo okhohlakeleyo weeyadi ozama ukonakalisa ihlobo lakho. Ungaluvumeli ukhula luphumelele! Nazi iingcebiso ezimbalwa zokugcina eyadini idandelion-free.
Eyona Ndawo yokuNika abaThengisi beNtaka oBalaseleyo onokuyithenga kwi-Intanethi
Ukugcina oonomatse, iintaka ezinkulu ezitya ezinye, kunye nezinye izitshabalalisi kunye neempuku kwindawo otya kuyo intaka, fumana enye yezi zinto zithengisa isquigrel-feeder ngehheyiji, ukuvuleka okubangela ubunzima, kunye neziciko zokutshixa.
I-10 ye-Evergreen Shrub ezilungileyo kakhulu - Izihlahla zemifuno yokutyala
Izihlahla eziqhakazayo zenza konke: ukutsala i-pollinators, ukudala ubumfihlo, kunye nokubonelela ngombala oqaqambileyo. Nazi izihlahla zethu ezihlala ziluhlaza.
Ezona zityalo zixhathisayo kakhulu-Izityalo ezingadliyo
Ukuba ufuna ukugcina igadi yakho ingenamaxhama ehlotyeni, khetha ezi zityalo zinganyangekiyo izilwanyana ezingathandi ukuzitya.
Ukutyala ngoMeyi-Iintyatyambo ezigqwesileyo kunye nemifuno yokutyala ngoMeyi
Kwimimandla efudumeleyo, imifuno ethanda ubushushu enje ngetumato kunye nee-eggplants-kwaye nakwilizwe lonke, iintyatyambo zonyaka-zonke zinokutyalwa ngoMeyi.
I-Herbs ezili-10 eziPhezulu ezingapheliyo kwiJadi yakho
Ezi zityalo zibuya minyaka le ngenxa yoko akufuneki uphinde uziphinde! Uninzi luneentyatyambo ezitsala iingcolisi, ngenxa yoko zitshintshele kunyaka kunye nonyaka ophelayo.
Ungayikhulisa njani i-Aloe Plants - Luhlobo luni lomhlaba olufunwa zizityalo zeAloe?
Nazi iimfihlelo zokukhulisa ngempumelelo ikhala lakho kule hlobo-ukutsha kwelanga kuyakubulela.
Iingcamango ezili-18 zoYilo lweGadi eNcinci- Uyilo lwangaphandle lweGadi yeZithuba eziMncinci
Lungiselela izithupha zakho eziluhlaza ezilungisiweyo ngezi mbono zincinci zegadi zincinci ezili-19, ukusuka kwibhokisi yeentyatyambo zewindow ukuya kwizityalo ezixhonyiweyo, kwigadi yangaphakathi yemifuno kunye nokunye.
Ukutyala ntoni ngoJuni
Ngobushushu obonyukayo, uJuni lixesha lokutyala iintyatyambo zonyaka kunye nemifuno eshushu yemozulu, nokuba kusemhlabeni okanye kwizikhongozeli.
Iingcali zegadi zithi kufuneka unkcenkceshele izityalo zakho ngekofu
Ukunkcenkceshela izityalo zakho ngekofu kunye nokusebenzisa indawo yekofu emhlabeni wakho kunokuba luncedo kwizityalo zakho ezinje ngendawo ene asidi.
I-15 ye-Shade Best Perennials - I-Shade-Loving Floral Powers kunye neZityalo
Sonke isityalo sifuna amanzi nelanga ukuze siphile, kodwa ayizizo zonke ezifuna umlinganiso olinganayo. Xa kuziwa ekukhanyeni ekukhanyeni, ezi zikhula (izityalo ezikhula zibuyele emva konyaka emva kokuba iingcambu zihlale zihlala ebusika) zikholelwa ngaphantsi kuninzi. Nazi iindawo ezingapheliyo ezinokuphila kwindawo yakho enomthunzi.
Izityalo ezingama-35 ezigqibeleleyo zangaphakathi - Izityalo eziPhakathi eziLungileyo zoLimi oluNcinci
Zonke ezi zityalo zithatha indawo encinci kwaye zifuna ilanga elingaphantsi (kufuneka xa uneefestile ezimbalwa oza kusebenza nazo). Kwaye, fumana ukuba ungabakhathalela njani ukuze ungababulali owesibini ubazisa ekhaya.
Ukutyala ntoni ngo-Epreli-Iintyatyambo ezigqwesileyo kunye nemifuno yokutyala ngeNtlakohlaza
Iintyatyambo zingatyalwa ngoku kwiindawo ezinemozulu efudumeleyo, ngelixa imifuno ebandayo eqinileyo ingatyalwa ngqo kwigadi yakho kuninzi lwelizwe lonke ukuya phakathi ku-Epreli.
AmaQongqothane aseAsia Ngawo Uhlobo olubi lweeLadybugs-Nantsi indlela yokuziLahla
Ewe, lukhona uhlobo olubi lwe-ladybug phaya-enokuthi ilume kwaye ibe ndlongondlongo, iyingozi ezinjeni, ihlasele ikhaya lakho, kwaye ishiye ngasemva ivumba elibi elityheli elinokungcolisa iindonga nefenitshala. Babizwa ngokuba ngooqongqothwane baseAsia kwaye baqala ukwaziswa eNyakatho Melika ngo-1916 ukulwa ne-aphids, kodwa ngoku banengxaki kuba sele begqithile kwiintlobo zemveli.
Indlela yokutyala iintyatyambo-Isikhokelo sokuqalisa igadi yakho
Ukutyala iintyatyambo lolunye lolonwabo lokwenene lokulima igadi! (Kwaye akunakuba lula, nkqu nakwabaqalayo.)
Ukunyamekelwa kweentyatyambo zePeony- Ixesha lePeony
Ixesha le-peony! Nantsi indlela yokunyamekela ezi zinto zihlala zihlala ixesha elide.
Esi Isixhobo Esimangalisayo Sokulima Igadi Hooks Kwisakhono Sakho Sokuqhuba
Ukumba imingxunya egadini kunganxiba iingalo zakho phantsi, kodwa ngesixhobo esitsha, imingxunya inokwenziwa ngokulula.
Ezona zityalo ziBalaseleyo kwiGadi yeBalkoni- Iintyatyambo kunye neeHerbs zokuKhula kwiBalkoni
Ukusuka kumayeza afana ne-oregano kunye ne-thyme ukuya kwientyatyambo ezinjengeemarigold kunye noomama, nantsi isikhokelo sakho kwezona zityalo zintle zokukhula kwibhalkoni yakho, ngokusekwe kwilanga okanye emthunzini wendawo yakho.
Uwenza njani uMda weLitye webhedi yeentyatyambo- Ndingayisebenzisa njani kumda weGadi
I-Mina Starsiak ye-HGTV ibambisene noLowe ukwabelana ngeengcebiso eziluncedo ngendlela yokulungiselela iyadi yakho ngeli xesha lonyaka-ngakumbi ukufaka umda weentyatyambo.
Izitulo ezili-10 eziLungileyo zokuLima iGadi kunye neeGadi zeGadi -Izihlalo eziPhathwayo zeGadi
Isitulo segadi, okanye igadi nje elula, ikunika indawo yokuhlala xa usebenza (okanye uphumle phakathi) eyadini yakho, umqamelo wamadolo akho, kunye nendawo yokulahla zonke izixhobo zakho zokulima. Snag esinye sezihlalo ezilungileyo zokulima ukuze wenze zonke izityalo zakho zibe ngumzali kube lula.
Uyilo lwamaphepha odonga ekhitshini
umbono omtsha wokubhiyozela unyaka omtsha
UChristina kunye nobudala betarek
Uyilo lwangaphakathi isoftware yasimahla
imibala ethandwayo yamakhitshi